DXF: zvaunofanira kuziva nezve iyi fomati fomati | Mahara emahara
Isaac | | General, 3D kudhinda
Iwe unogona kunge wakauya kuchinyorwa ichi nekuti iwe unoziva iyo mafaera muDXF fomati uye iwe unofanirwa kuziva chimwe chinhu nezvazvo, kana kungoita nekuda kwekuda kuziva nekuti wanga usingavazive. Muzviitiko zvese izvi, ndichaedza kukuratidza zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyi yakakosha fomati fomati mumunda wedhizaini.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda inopindirana software nemhando iyi, uye kwete chete AutoCAD inogona kuchengeta zvigadzirwa kana kuvhura muDXF. Muchokwadi, mikana yacho yakawanda kwazvo ...
1 Chii chinonzi DXF?
2 Inoenderana software
3 3D uye DXF kudhinda
4 DXF ye 3D uye CNC kudhinda
Chii chinonzi DXF?
DXF ndicho chidudziro muChirungu che Darwing Shanduko Fomati. Iyo fomati fomati ine .dxf yekuwedzeredza inoshandiswa pamakompiyuta-anobatsira kudhirowa kana dhizaini, ndiko kuti, kweCAD.
Autodesk, muridzi uye mugadziri weanozivikanwa AutoCAD software, ndiye akagadzira fomati iyi, kunyanya kugonesa kudyidzana pakati peiyo DWG mafaera anoshandiswa nesoftware yayo uye nemamwe mapurogiramu akafanana pamusika.
Simuka kekutanga mu 1982, pamwe neyekutanga vhezheni yeAutoCAD. Uye ndezvekuti nekufamba kwenguva maDWG ave kuwedzera kuomarara, uye kugona kwayo kuburikidza neDXF kwave kwakaomarara. Haasi ese mabasa eDWG-anoenderana aendeswa kuDXF uye izvi zvinotungamira kune zvinoenderana nyaya uye zvisirizvo.
Pamusoro peizvozvo, DXF yakagadzirwa senge rudzi rwekupenda yekuchinjana faira kuva fomati yepasirese. Nenzira iyi, maCAD modhi (kana 3D modelling) anogona kuchengetwa uye kushandiswa neimwe software kana zvinopesana. Ndokunge, munhu wese anogona kuunza kana kutumira kunze kubva kana kune iyi fomati zviri nyore.
DXF ine chivakwa chakafanana nedhatabhesi yekudhirowa, kuchengetedza ruzivo mu akajeka mavara kana mabhaariari kutsanangura marongerwo uye zvese zvinotora kuvaka iyi.
Pane zvisingaperi software michina iyo inogona kubata aya mafaera muDXF fomati, mamwe anogona kungovhura uye kuratidza iwo magadzirirwo, mamwe anogona zvakare kuendesa / kutumira kunze pamwe nekugadzirisa iwo magadzirirwo.
Pindai iyo software runyorwa inozivikanwa iyo inogona kuenderana neDXF yaizosimbisa:
Blender (uchishandisa import script)
Microsoft Office (Shoko, Visio)
Maererano ne chikuva yaunoshanda nayo iwe unogona kushandisa imwe kana zvimwe zvinoshandiswa. Semuyenzaniso:
Android- Unogona kushandisa AutoCAD iyo inowanikwawo kune nhare mbozha uye inogamuchira DXF.
Windows- Unogona zvakare kushandisa AutoCAD uye Dhizaini Ongororo pakati pevamwe, seTurboCAD, CorelCAD, CorelDraw, ABViewer, Canvas X, Adobe Illustrator, nezvimwe.
macOS: Kune akati wandei anozivikanwa mapurani ekugadzira, imwe yacho ndeye AutoCAD, asi iwe zvakare une SolidWORKS, DraftSight, nezvimwe.
Linux: imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anonyanya kushandiswa ndeye LibreCAD, asi iwe unogona zvakare kushandisa DraftSight, Inkscape, Blender, FreeCAD, nezvimwe.
Browser: kuvhura iyo DXF pamhepo, pasina kudikanwa kwezvirongwa, iwe unogona zvakare kuzviita kubva kune yako yaunofarira browser kubva ShareCAD kanawo ProfCAD.
Uye zvechokwadi, kune epamhepo uye emunharaunda maturusi ku pindura pakati pemhando dzakasiyana dzemafaira, kusanganisira DXF. Naizvozvo, iwe unogona kushandura kuenda kana kubva kune mamwe mafomati pasina matambudziko. Kunyangwe ini ndisinga vimbise kuti dhizaini ichave yakafanana kana chimwe chinhu chakasarudzika ...
3D uye DXF kudhinda
Kana iwe ukashandisa 3D printer iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvakare software ye chinja pakati pemafomati akasiyana inonakidza kwazvo. Iyi ndiyo mamiriro enzira mbiri idzi:
mesh lab: yakavhurika sosi software, inotakurika, uye inoshandiswa zvakanyanya kugadzirisa uye kugadzirisa 3D meshes. Unogona kugadzira zvinhu nenzira dzakasiyana, senge OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D uye, zvedi, DXF. Iyo inowanikwa yeLinux (zvese zviri zvepasirese Snap mapakeji uye muAppImage yechero distro), macOS, uye Windows.
MeshMixer: yakafanana neiyo yapfuura, imwe nzira. Mune ino kesi zvakare yemahara uye inowanikwa kune macOS uye Windows.
DXF ye 3D uye CNC kudhinda
Nekuwanda kwe 3D kudhinda uye CNC michina Muindasitiri, mafaira eDXF ave akakosha. Iwe unofanirwa kuziva kuti kune mamwe mawebhusaiti ayo anotendera iwe kudhawunirodha maDXF mafaera akagadzirwa-akagadzirwa dhizaini kufambisa kuvaka kwezvinhu. Nenzira iyoyo, haufanire kuzvigadzira pachako, izvo zvinobatsira kwazvo, kunyanya kana iwe usingazive maitiro eCAD software.
Kune mamwe mawebhusaiti anobhadharwa, ndiko kuti, iwe unofanirwa kubhadhara kunyorera kuti ugone kuwana izvo zvigadzirwa uye kurodha pasi zvakasununguka. Vamwe vari vakasununguka, uye iwe unogona kuwana zvishoma zvezvose. Kubva pamarogo akapusa kuitira kuti ugone kuagadzira kubva kuDXF yakadhindwa nemuchina wako, kuzvinhu, zvishongo, fenicha, mahwendefa, nezvimwe.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kutanga kuyedza DXF mune chero eesoftware zvirongwa zvakanyorwa pamusoro, ini ndinokurudzira kuti iwe ushandise imwe yeiyi mawebhusaiti emahara:
DXF Ye CNC
DXF CNC Dhizaini
CNC DXF Mafaira
Así iwe uchazojairana nemhando yacho uye neaya magadzirirwo, kana kuyedza muchina wawatenga kuti uone kana uchiita basa rawo nemazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » 3D kudhinda » DXF: zvaunofanira kuziva nezve iyi fomati fomati